चिप्ले भिन्डीका छन् धेरै फाईदाहरु: | सुदुरपश्चिम खबर
त्यसमध्ये केही ’मस्याको बारेमा तल उल्लेख गरिएको छ । अनु’हारमा चमक ल्याउनको लागि मद्दत गर्छ बेसारले बेसारमा एन्टि’अक्सिडेन्ट र एन्टी’इन्फ्लेमेटरी तत्व पाउने गरिन्छ । जसले हाम्रो छा’लालाई प्रा’कृतिक रुपले चम’कदार बनाउँछ ।
औ’षधीय गु’णले भ’रिपूर्ण बे’सारबाट एउटा वि’शेष फे’स मा’स्क घरमा बनाउन सकिन्छ । यसरी बनाऔं फे’स मा’स्क । सामग्री बेसार, दही, मह बनाउने विधि दही र महको मि’श्रणलाई राम्रोसँग मिसाएर अ’नुहारमा लगाउनु छा’लाको लागि राम्रो मानिन्छ । यो फे’स मा’स्कलाई करिब १५ मिनेटसम्म अ’नुहारमा लगाउनुहोस् र फेरि चि’सो पा’नीले धुनुहोस् ।
यसले छा’लाको चमक बढाउँछ । अ’नुहारमा निस्कने दा’गको समा’धानका लागि बेसार यदि छा’लामा बारम्बार दा’ग’को स’मस्या आउँछ भने यसको स’माधानको लागि कैयौं प्रकारका क्रिमहरू बजारमा पाउन सकिन्छ । यसरी उ’पचार गराउँदा पनि कुनै फाइदा भइरहेको छैन भने यसको लागि प्रा’कृतिक उप’चार खोज्न सकिन्छ ।
बे’सारले छा’लालाई चिल्लो बनाउन मद्धत गर्छ । अनुहारको दा’ग ह’टाउको लागि प्रयोग गरिने प्रा’कृतिक उ’पचारको लागि निम्न तयारी गर्न सकिन्छ । आवश्यक सामग्री दही, गुलाब राखिएको पानी, बेसारको धुलो, स्नान गर्नको लागि प्रयोग गर्ने माटो बनाउने वा लगाउने विधि स्नान गर्नको लागि प्रयोग गर्ने शु’द्ध माटोमा दही, गुलाबको पानी र बेसारको धुलो राख्नुहोस् । यसबाट एउटा पेस्ट तयार हुन्छ । त्यसपछि यसलाई अ’नुहारमा लगाउनुहोस् र करिब १५ मिनेटको लागि लगाएर त्यसै बस्नुहोस् । जतिबेलासम्म अनु’हारमा त्यो सुक्दैन, त्यतिबेलासम्म यसलाई सुक्न दिनुहोस् ।
त्यसपछि चिसो पानीले अ’नुहार धुनुहोस् । बे’सारसहितको यो फेस मास्क ह’प्तामा एक पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । सं’वेदनशील छा’लामा उ’त्तेजना कम गर्नका लागि बेसार कतिपय छा’ला संवे’दनशील खालको हुने गर्छ । यसकारण कैयौं पटक छा’ला चि’लाउने, ज’लन र उ’त्तेजना हुने गर्छ । यदि तपाईंको छा’लामा पनि त्यस्ता स’मस्या आएको छ भने बेसारबाट बनेको प्राकृतिक उप’चार गरिहाल्न सक्नुहुन्छ ।
जसमा बे’सारसँगै ए’लोबेरा जे’ल पनि मिसाउने गरिन्छ । आ’वश्यक सामग्री बे’सार र ए’लोबेरा तेल कसरी बनाउने ? आ’धा चम्चा ताजा ए’लोवेरा जे’लमा थोरै बेसारको धु’लो मिसाएर त्यसको मिश्र’णबाट एउटा पे’स्ट बनाउन सकिन्छ । फेरि यसलाई अ’नुहारमा लगाएर करिब २० मिनेटसम्म सुक्न दिनुपर्छ । त्यसपछि यसलाई चि’सो पानीले धुनुहोस् । दा’ग ध’ब्बा र घा’उ ठीक गर्नको लागि जस्तो कि पहिले नै बताइसकेको कुरा बेसारमा ए’न्टी इ’न्फ्लेमेटरी तत्व पाउने गरिन्छ ।
जसले छा’लामा हुने रौं’को छि’द्रलाई सफा राख्न मद्धत गर्छ । यसका अलावा बे’सारमा एन्टी’सेफ्टिक गुण समेत हुन्छ । जुन कुनै पनि किसिमको दा’ग ध’ब्बा घा’उ या चो’टको निशान समेत ह’टाउन प्र’भावकारी मान्ने गरिन्छ । सामग्री १ चम्चा बे’सन, थोरै बे’सार र अलिकति मलाई कसरी बनाउने ?
माथि उल्लेखित तीन कुरालाई राम्रोसँग मि’साएर जहाँ दा’ग ध’ब्बाको निशान छ, त्यसमा लगाउनु पर्छ र करिब २० मिनेटसम्म अ’नुहार सुक्न दिनुपर्छ । पछि मन’तातो पानीले अनुहार धुनुपर्छ । यसले धेरै फाइदा गर्छ । अनु’हारमा बेसार लगाउनुका नो’क्सानी हुन त बेसार पूरा प्रा’कृतिक सामग्री हो ।
तर पनि यसलाई अ’नुहारमा लगाउनुका केही नो’क्सानी समेत छन् । अ’नुहारमा बे’सार लगाउँदा अ’नुहार पहेँलो हुने गर्छ । यो त सामान्य कुुरा हो । तर यदि कसैलाई बेसारसँग ए’लर्जी छ भने अ’नुहारमा बे’सार लगाउनुपूर्व चि’कित्सकसँग कुराकानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाहेक बे’सारको खासै नो’क्सानी नरहेको चि’कित्सकहरू बताउँछन् । (urlabarinews.com बाट साभार)